Dowladda Soomaaliya oo gacanta ku dhigtay Horjooge sare oo ka tirsan Al-Shabaab | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Dowladda Soomaaliya oo gacanta ku dhigtay Horjooge sare oo ka tirsan Al-Shabaab
Dowladda Soomaaliya oo gacanta ku dhigtay Horjooge sare oo ka tirsan Al-Shabaab
Ciidammada xasillinta caasimadda ayaa gacanta ku dhigay horjoogihii Al-Shabaab ku qaabilsanaa dhibaateynta shacabka Muqdisho kaddib howlgal qorsheysan oo ay ciidanku ka sameeyeen Suuqa Bakaaraha ee magaalada Muqdisho.
Wasiirka Amniga Gudaha Mudane Maxamed Abuukar Isloow (Ducaale) oo shir jaraa’id ku qabtay madaxtooyada Soomaaliya ayaa xaqiijiyey in ciidammada amniga Muqdisho gacanta ku dhigeen C/wahaab Khaliif Ciise (Tarabuunka) oo ah horjoogaha Al-shabaab Amniyaadka caasimadda u qaabilsan.
Mudan Ducaale Wasiirka Amniga Soomaaliyaa yiri “horjoogahaan oo dhibaato culus ku hayey shacabka Muqdisho ciidanka amniga ayaa qabtay xili uu si dhuumaaleysi ah ku joogay gudaha Suuqa weyn ee Bakaaraha, hey’ahada Bukhaabaraadka Soomaaliya ayaa muddo badan ku dabo-jiray soo qabashadiisa, si dhibaatadiisa ummadda Soomaaliyeed looga badbaadiyo”.
C/wahaab Khaliif Ciise (Ciise Tarabuun), Kooxda Al-Shabaa waxa uu u qaalibsanaa wax ay ugu yeeraan Amniyaadka Muqdisho ama dilalka qorsheysan ee argagixisadu ka geystaan caasimadda, tani ayaa dhabar jab weyn ku ah kooxda Al-Shabaab oo la wiiqay shabakadihii ay ku lahaayeen magaalada Muqdisho.
Previous articleDowladda UK oo kor u qaaday taageerada gargaarka ay siiso Soomaaliya
Next articleWasiirka Amniga “Waxaan gacanta ku dhignay Madaxii Amniyaadka Gobolka Banaadir C/wahab Khaliif Axmed”